Shacab Careysan Oo Banaanbax Rabshado Watay Ka Dhigay Somaliland | Weheliye Online
Shacab Careysan Oo Banaanbax Rabshado Watay Ka Dhigay Somaliland
Magaalada Burco ee Xarunta Gobolka Togdheer ayaa waxaa habeenkii xalay aheyd ka dhacay banaanbax xoogan oo rabshado watay, kaasi oo soo horjeeday Go’aan ay gaartay Maxkamadda Ciidamada Somaliland.
Boqolaal dadweyne ayaa xalay isugu soo baxay waddooyinka Magaalada Burco, iyagoona ahaa kuwo ka careysasn Xukun xarig ah oo Maxakamadda Somaliland maalmo kahor ku riday Sarkaal ka tirsan Ciidanka Milatariga Somaliland.
Dadka dhigaayay banaanbaxa ayaa taayaro waaweyn ku gubayay waddooyinka, isla markaana ku xiray dhagxaan, sida lagu arkayay Sawirro laga soo qaaday, iyagoona sheegay inay kasoo horjeedan xukun laba sanno ah oo lagu riday Korneyl Jaamac Doolaal.
Qaar kamid ah dadka dhigaayay banaanbaxa ayaa Maxkamadda Ciidamada Milateriga Somaliland ka dalbaday inay dib uga laabato xukunka xariga ah ee lagu riday Korneyl Jaamac Doolaal.
Sarkaalkan ayaa waxaa ay Maxkamadda ku heshay dembi ah inuu xiriir wicitaan la sameeyay qof ku sugan gudaha Soomaaliya gar ahaan Magaalada Muqdisho, isla markaana uu kala hadlay Arrimo ku aadan qoys iyo kuwo kale oo gaar ahaa.
Previous articleDegDeg:- 39 Ruux oo ku geeriyooday doon ku dagtay xeebaha Dalka Jabuuti.
Next articleDeg Deg Farmajo Oo Saxiixay Mudo Kordhintiisa, Digniinta Beesha Caalamka